TuLotero, ngwa iji zụta lọtrị | Esi m mac
TuLotero, ngwa iji zuta lọtrị
Agbanyeghi na a na-ere iri n’abalị iri maka agbata ekeresimesi n’ọnwa Ọgọst, ọtụtụ ndị bụ ndị ọrụ na-eche oge ikpeazụ iji zụta nkeji iri, iri nke masịrị gị, ọ bụghị n'ihi na anyị na-ahụkarị imebi iwu n'ebe ndị anyị na-agakarị. Mana obughi onye obula hapuru ya rue oge ikpeazu, obu ezie na odi.
Ndị na-eche echiche n'ihu, mana ọkachasị ndị na-achọ nọmba pụrụ iche kwa afọ, na-echekarị oge ekeresimesi ma zụta tiketi ha tupu oge eruo, ọkachasị gbochie ọnụ ọgụgụ achọrọ ka ọ ghara ịga ngwa ngwa.
1 Wayzọ ọhụrụ iji zụta Lọt
2 Lottery kesara TuLotero
3 Ma gịnị bụ TuLotero? Ọ dị mma?
Wayzọ ọhụrụ iji zụta Lọt
N’oge gara aga, usoro a na-ahụkarị iji nwee ike ịzụta nọmba anaghị adị ebe anyị bi, bụ ịkpọtụrụ ndị enyi ma ọ bụ ndị enyi bi n’obodo ahụ, ọ bụ ezie na nke ahụ anaghị ekwe gị nkwa na ị ga-abịa n’oge zụta ya tupu Ọ gwụchaa. TuLotero bụ ngwa na-enye anyị ohere ịzụta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nọmba ọ bụla nke National Lottery na nhazi dijitalụ ma ọ bụ ọ bụrụ na ịchọrọ, anyị nwekwara ike zụta ya na usoro nkịtị ka enwere ike zitere anyị site na mail na adreesị anyị, ọ bụ ezie na ozugbo iji TuLotero mara gị, ị ga-ahụ uru niile nke ụzọ ịzụta ọhụrụ a tiketi gị na-enye gị.
Lottery kesara TuLotero
N'ihi ọrụ a, anyị nwere ike ịkekọrịta ngwa ngwa na n'enweghị, na Christmas tiketi na anyị zụrụ na kọntaktị ọ bụla nke anyi burukwa. Ana m ekwu na nchekwa zuru oke, n'ihi na na sava nke ọrụ a, a na-echekwa ọnụọgụ ọnụ yana ndị mere ya.
Atụmatụ a dị mma maka ọrụ, mgbe onye ọ bụla n’ime ndị ọrụ ahụ zụrụ otu ụzọ n’ụzọ iri na n’etiti ihe nile ha chọrọ ịkekọrịta n’ụzọ dị nchebe. Ọ bụrụ n’ikpeazụ anyị bụ ndị nwere ihu ọma na ọ bụkwa oge nke anyị, a ga-etinye akwụkwọ anamachọihe nke itinye ego n’ime akaụntụ akụ nke onye ọ bụla so na ya, na-enweghị ụdị ọrụ ọ bụla, mgbe Treasury tinyechara aka.
N'afọ a, TuLotero agbakwunyela ọrụ ọhụụ na-enye ụlọ ọrụ ohere ijikwa lọtrị ekeresimesi, nke mere na ọ dịghị mkpa ịgagharị na onye ọrụ na-arịọ maka ego nke otu ụzọ n'ụzọ iri Dị ka anyị pụrụ ịhụ, ha niile bụ uru, na ha niile n'efu.
Ma gịnị bụ TuLotero? Ọ dị mma?
TuLotero bụ ngwa maka ekwentị mkpanaaka nke na-enye anyị ohere ọ bụghị naanị ịzụta tiketi mba lọtrị, kamakwa Ọ na-enyekwa anyị ohere ịzụta tiketi maka Primitiva, Euromillions, Bonoloto, La Quiniela, na Sorteo del Niño ... ihe a niile bụ nkasi obi anyị, na-enweghị ịme ihe ma na-enweghị ihe ize ndụ na anyị ga-echefu ụfọdụ izu iji gafee nchịkwa, ọkachasị mgbe anyị na-eji otu nọmba egwu egwu.
Ugbu a ngwa nwere ihe karịrị 150.000 aha ndị ọrụ ebe ọ bụ na ọ kụrụ ahịa karịrị ihe karịrị otu afọ gara aga. Ugbu a TuLotero na-arụkọ ọrụ yana ọchịchị iri-anọ nke ọgbara ọhụrụ ma kesaa na Spain niile, gọọmentị ndị na-ere tiketi ha site na ngwa ahụ.
TuLotero bụ ngwa dabere na teknụzụ yiri nke ụlọ akụ ji eme ihe. Mgbe ọtụtụ afọ nke mmepe ọ kụrụ n'ahịa n'afọ gara aga. Ngwa a zuru oke ma dịkwa ruru nkwekọrịta dị iche iche na ụlọ ọrụ dịka BBVA, PwC, ENISA, Redsys. N'ime ụlọ ọrụ ndị tụkwasịrị obi na ọrụ TuLotero ugbu a, anyị nwere ike ịchọta La Nevera Roja, Deliveroo, Badi ...
Ma echiche kachasị mma na ngwa metụtara ọrụ na-enye ndị ọrụ mgbe niile. Ngwa a nwere akara 4,5 n'ime kpakpando 5 na inlọ Ahịa App na ihe karịrị 2.500 nyocha, nke na-ekwe nkwa na arụmọrụ ya na njikwa nke ọ na-enye anyị ohere ịme bụ nke ekwuru. Na mgbakwunye, TuLotero na-enyekwa anyị ohere ịbanye tiketi anyị zụtara n’adabereghị ka ọ bụrụ na enyere anyị aka, ọ ga-eme ka anyị mata ngwa ngwa ma ọ bụrụ na enyerela anyị aka.
TL: Lotgba chaa chaa na Ggba chaa chaafree
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » TuLotero, ngwa iji zuta lọtrị
Dee akwụkwọ dijitalụ na ngwa ndị a maka Mac
Ka nwere ike ịzụta Mac ọhụrụ gị yana mbelata 22%